Isitolo esidayisa yonke impahla GQ-208 Compound Antifreeze Agent ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
I-GQ-208 yakhiwe ngento enciphisa amanzi nezinhlobonhlobo zezinto ezingaphili, i-organic antifreeze ingxenye nengxenye yamandla okuqala. Isetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwasebusika kwazo zonke izinhlobo zikakhonkolo we-cast-in-place, ukhonkolo we-precast. Ikhwalithi yomkhiqizo ku-JC475 namanye amazinga.
I-GQ-208 yakhiwe ngento enciphisa amanzi nezinhlobonhlobo zezinto ezingaphili, i-organic antifreeze ingxenye nengxenye yamandla okuqala. Isetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwasebusika kwazo zonke izinhlobo zikakhonkolo we-cast-in-place, ukhonkolo we-precast. Ikhwalithi yomkhiqizo ku-JC475 namanye amazinga
1.Ukunciphisa ngempumelelo iphuzu lokuqandisa lamanzi mahhala kukhonkolo ukuvimbela isithwathwa.
2.Promote the hydration kasimende ngaphansi kwezimo zokushisa okuphansi, uthuthukise amandla okuqala kakhonkolo, wandise ikhono lokumelana nesithwathwa
I-3.Inezici zamandla okuqala, ukuqiniswa, ukunciphisa amanzi nokufakwa komoya. Ingasetshenziswa njenge-ejenti yamandla yokuqala.
4.Improve izakhiwo ngokomzimba futhi mechanical ukhonkolo, ngcono inkomba ukuqina
Alkalali 5.Low, akukho ukugqwala ukuze steel bar. Ayinabo ubuthi, ayinabungozi, iphephile empilweni nasemvelweni
1.Kulungele ukwakhiwa kwasebusika kwazo zonke izinhlobo zikakhonkolo owenziwe ngomshini, ukhonkolo we-precast, zonke izinhlobo zodaka, njll.
Ingasetshenziswa ekwakhiweni kwemigwaqo ebusika, izikhumulo zezindiza, amabhuloho, amandla kagesi, ukonga amanzi, amachweba kanye namaphrojekthi wokwakha omphakathi nawasezimbonini
3.Ingahlanganiswa ne-ejenti yokwehlisa amanzi ukulungisa ukhonkolo wepulasitiki kanye nempompo kakhonkolo
I-4.D3 isebenza ekwakhiweni ngaphansi kwezimo zezulu lapho izinga lokushisa elicacisiwe lingu -15 ℃ noma ithempelesha yemvelo engehli kune -20 ℃; I-D4 ilungele ukwakhiwa ngaphansi kwezimo zezulu ezinamazinga okushisa acacisiwe ku -10℃ noma ithempelesha yemvelo engehli kune -15 ℃
Isikali: powder 2.0 ~ 3.0%; Uketshezi kwakungu-2.0 ~ 3.0% (kubalwa inani eliphelele lezinto zokuqinisa usimende).
I-powder ingangezwa kumxube kanye neqoqo; I-Liquid ingaxubaniswa nokuxuba amanzi, kwenze ngokufanelekile isikhathi sokuxuba. Amanzi ashisayo kufanele asetshenziswe lapho kwakhiwa khona lapho izimo zivuma.
Okuhlanganisiwe ngeke kuhlanganiswe neqhwa, iqhwa, iqembu elifriziwe, njll., Futhi ingqikithi ingafudunyezwa uma izimo zivuma.
Ebusika ukwakhiwa kokhonkolo ngaphezu kwe-ejenti yokulwa nokuqandisa ngasikhathi sinye kusamele kwenziwe ngokuqinile "Imithetho yezobuchwepheshe bokwakha ebusika", ukuthela ukhonkolo kufanele kufakwe ngesikhathi esifanele nefilimu yepulasitiki, kuqinise ukwahlukanisa nokugcinwa
Umthamo omkhulu kufanele unqunywe ngokuya ngezimo zokushisa nezidingo zobunjiniyela ngaphambi kokusebenzisa lo mkhiqizo
Powder ngu plastic nokwelukiweyo isikhwama nokupakisha, 50㎏/ isikhwama; Uketshezi ngesigubhu, 250㎏/ isigubhu noma ezokuthutha ezinkulu zethangi
Ubufakazi obumanzi, ubufakazi bokushisa okuphezulu, ubufakazi bokulimala; Isikhathi sokusebenza unyaka ongu-1, ngemuva kokuphelelwa yisikhathi, kufanele siqinisekiswe isivivinyo esizosetshenziswa futhi
Lo mkhiqizo awuthumeki futhi awuyiziqhumane, uwugcine kahle.
Olandelayo: I-GQ-KG (L) / 01/02 Umenzeli Wokuxhuma Ikhebula